LAZ • rapgasy.mg
RAKOTONDRAVAO Tsiriniaina Thierry Nicolas, fantatra amin’ny anarana hoe LAZ dia rappeur iray niatomboka tany Fianarantsoa tamin’ny taona 2000 tany ho any.
Tao anatin’ny tarika hoe « BOLZA » izay midika hoe : BOaikely Loza amin’ny ZAva-drehetra no nisy azy tamin’izany ary niaraka tamin’ny bandy maromaro.
Tany amin’ny taona 2002 dia niditra nanatevin-daharana tao amin’ny clan lehibe iray : BOGOTA, tany Fianarantsoa ary tao no nahafantarana azy voalohany tamin’ny sehatrry ny Rap Gasy. AROAMA ny groupe nisy azy tamin’izany izay fantatra tamin’ilay hira hoe « Fahafahana » tamin’iny taona 2004-2005 iny ary mbola BOGOTA foana hatramin’izao fotoana.
Nandeha ihany ny fotoana ka tamin’ny taona 2006 teo dia niakatra taty Antananarivo nanohy fianarana. Tamin’io taona io ihany dia niara-niasa akaiky tamin’ny groupe iray hoe « MASONALOKA » ka nanorina ilay hoe « AROAMASKA » niaraka tamin’i Zombi sy Soekarno. Nanomboka teo koa ny fiara-miasa tamin’ireo rappeur maromaro teto andrenivohitra toy i Sakina Fray, FEFILOHA, BOGOTA TANA, sns.
Nandeha teny ny fotoana ka tamin’ny taona 2008 dia niditra tao anatina connexion iray teny Ampefiloha « OTENTIKA CONNEXION », izay nivondronan’ny Sakina Fray sy FEFILOHA. Tafiditra lalindalina kokoa ny fiaraha-miasa, tsy vitan’ny hoe tany amin’ny Rap fotsiny fa hatrany amin’ny fiainana andavan’andro ka tapa-kevitra ny handroso lalindalina kokoa ny tarika.
Taty aorina rehefa nozarazarain’ny adidy sy ny andraikitra rehetra teny amin’ny fiaraha-monina dia 4 sisa no nandrafitra ankehitriny ny OTENTIKA : Laz, SKINTO, Stoïka, Soafara.
Manana ny fototra hijoroany sy foto-pisainana mampiavaka azy tokoa ny OTENTIKA indrindra ny fanantonana akaiky ny zava-misy eny amin’ny fiaraha-monina sy ny toe-draharaha misy eto amin’ny firenena ary miezaka hatrany ny hampita hafatra lalandava amin’izay hira avoaka.
LAZ, eo amin’ny mozika RAP GASY dia manome lanja kokoa ny soratra + flow ary mivelatra amin’ny fiaraha-miasa rehetra rehefa hoe mitovy ny fomba fijery. Tsy dia mifidy instru ahoana loatra fa rehefa hita fa mety amin’ny thème sy ny zavatra tiana avoaka tonga dia azo petahana tsara nefa matetika ny instru tena manavanana dia izy somary BOOMBAP MELANCOLIQUE.
Mbola manana ertreritra sy fijery lavitra i LAZ eo amin’ny sehatry ny RAP GASY fa arao eny ihany ny vaovao indrindra ny tarika OTENTIKA
301 REPREZENT • rapgasy.mg says:
[…] / Cadreur : Valé Manda , Skwatte Réal : LAZ Prod : B.Boy […]
20 avril 2016 3 h 02 min
SAGA TANGALA 2
Nivaly ny Fanontanian’ny maro an’isa. TANGALA MAINTY CLAN dia manolotra ho anao...
Remix Gyl KAPDAH
Herimiafina (TANGALA MAINTY)
Affichage du Contenu en 1,539,882,046.140 seconde(s) avec 94 requêtes SQL